जमुना गुरूङकाे उम्मेद्वारी स्वाभाविक हाेइनः भट्ट
HOME » जमुना गुरूङकाे उम्मेद्वारी स्वाभाविक हाेइनः भट्ट
काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आठौं विश्व सम्मेलनका अध्यक्षका उम्मेद्वार एवम् बर्तमान उपाध्यक्ष भवन भट्टले अध्यक्षको लागि आजमात्रै उम्मेद्वारी घोषणा गरेकी जमुना गुरुङलाई चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिएकोमा स्वागत गरेका छन्।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै भट्टले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने,‘जमुना भाउजुले आज उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभयो, यसलाई मैले स्वभाविक देख्दिन्, तर पनि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको नै चुनाव हो, उहाँ आउनुभयो अब चुनावी मैदानमा उहाँलाई स्वागत छ।’
उनले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको समस्या, पीर, मर्काहरु बुझेको र अन्र्तर्राष्ट्रिय कोर्डिनेशन कमिटीमा बसेर काम गरेको मान्छे नेतृत्वको लागि उपर्युक्त हुने बताए।
भट्टले अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी गुरुङ मुलुकले नै गर्व गर्न लायक व्यक्तित्व भएको भन्दै अहिले नै संस्थाको अध्यक्षमा आउन खोज्नु हतार भएको गुनासो पोखे। गुरुङ्ले आफूमा कन्फिडेन्स देखेर नै चुनावी मैदानमा आएकोले आफूले त्यसलाई सहर्ष स्विकार गर्ने उनको भनाइ थियो।
भट्टले आफ्नो जीतको पहिलो आधार नै सम्पूर्ण एनआरएनए बताए। उनले भने, ‘म त लगभग साझा उम्मेद्वारकाे रुपमा उभिएको छु, हुन त यो बीचमा सर्वसम्मतीले नेतृत्व चयन हुनेभयो भनेर साथीहरु खुशी हुनुभएको थियो, तर जमुना भाउजुले अन्तिम समयमा आएर उम्मेद्वारी दिनुभयो, यो म स्वभाविक देख्दिन्।’
उनले आफूलाई संस्थाका संस्थपक अध्यक्षद्धय डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लाछिाने र हालका अध्यक्ष डा. शेष घलेको पनि पूर्ण साथ र सहयोग रहेको दाबी गरे।
उनले यसअघि एनआरएन जापानको अध्यक्ष तथा एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कोषाध्यक्षका रुपमा बसी कार्यसम्पादन गरि सकेका कारण अध्यक्षमा पनि आफू सफल हुने जिकिर गरे।
भट्टले वर्तमान नेतृत्वले अघि बढाएको लाप्राक नमुना वस्ती निर्माणलाई समयमै सक्ने गरी काम गरिने पनि प्रतिबद्धता जनाए। भट्टले वर्तमान नेतृत्वले अघि सारेको एनआरएनको भिजन ट्वान्टी–ट्वान्टी एण्ड वियोन्ड, सामुहिक लगानीका परियोजना निर्माण लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए।
उनले एनआरएन भवन निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिने बताए। एनआरएनएमा आवद्ध वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बीमा गर्ने, स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था गर्ने, स्मार्ट एनआरएन बनाउने लगायतका नयाँ एजेण्डा उनले सुनाए।
उनले आफूहरुको संस्था नेपालीहरुको लागि नेपाली भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना भएको उल्लेख गर्दै स्थापनाकालदेखि नै आफू सक्रिय भएर लागिरहेको जनाए । उनले भने, ‘हाम्रो संस्था वास्तवमै भोलुटियर्स संस्था हो, हामी अहिले राष्ट्रको समृद्धिको लागि लागिपरिरहेका छौं, हाम्रो अरु कुनै उद्देश्य छैन, मुलुक समृद्ध भएको हेर्न मन छ।’